Waaxda Socdaalka oo ka laabatay amarkii ahaa in la joojinayo duulimaadyada Muqdisho iyo Hargeysa – STAR FM SOMALIA
Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta dib uga laabatay amarkii ay horay u soo saartay ee ahaa in la joojin doono duulimaadyada Muqdisho iyo Hargeysa.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Taliyaha Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha C/llaahi Gaafow Maxamuud ayaa lagu sheegay in la xaliyay cabashadii shacabka Soomaaliyeed kala kulmi jireen Garoonka Diyaaradaha Cigaal.
Lama oga qaabka arrintan loo xaliyay, hase ahaatee War saxaafadeedka ayaa loogu mahad celiyay madaxdii gacanta ka geysatay xalinta cabashadii jirtay.
Taliyaha Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Jen, C/llaahi Gaafow ayaa amar uu soo saaray horaantii bishan waxaa uu muddo 21 cisho u qabtay in Shirkadaha diyaaradaha ay ku joojiyaan duulimaadyadii Hargeysa iyo Muqdisho, kadib markii uu ku eedeeyay Maamulka Somaliland inay ku qasbayaan shacabka inay goostaan Go Home ama dal ku gal.
Hadaba War saxaafadeedka ka soo baxay Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo nuqul ka mid ah na soo gaaray ayaa sidan u qornaa:-